ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်မှာအဓိကပါ - နှုန်းထားများ
ငါကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါသူတို့စဉ်းစားနေတာကိုငါအမြဲတမ်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုယူဆထားတာကကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ထူးဆန်းသောဗဟုသုတများရရှိသည်ဟုဆိုသည်။ သင်၏ Netflix ပျက်သွားသောအခါဘာလုပ်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ ငါကလူဟောင်း၏ Laptop ကိုကဖေးမှာထိုင်ပြီးဖောက်နိုင်သည်။ Blah blah blah ... ဒီအချက်ကိုပြောပြဖို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ယူဆချက်က Internet Explorer ကိုသုံးတဲ့သူတစ်ယောက်လောက်မှားယွင်းနေလိမ့်မယ်။
ငါသည်သင်တို့၏ကွန်ပျူတာကို fix လို့မရဘူး, ဒါကြောင့်မမေးကြဘူး
Person: ဟုတ်တယ်၊ ဘာတွေလေ့လာနေတာလဲ
သင်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. သေချာမသိပါပဲလာသောအခါဘာလုပ်ဖို့
Person: အိုးကကြောက်စရာကောင်းတယ် ဒီတော့မင်းကြိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြင်နိုင်သလား။
* အဆင်မပြေတိတ်ဆိတ် *
ကျွန်ုပ် - မင်းဒါကိုပိတ်ပြီးပြန်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့လား။
ပထမ ဦး စွာ၊ ကျွန်ုပ်တွေ့သောလူတိုင်းတွင်ကွန်ပျူတာဘာကြောင့်ပျက်နေတာလဲ။ နည်းနည်းထူးဆန်းပုံရသည်။
ဒုတိယအချက်ကတော့၊ မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာကိုငါ fix နိုင်ရင်တောင်ငါတကယ်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ထင်သလား။ ငါလုပ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အရာတို့ကိုရရှိပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်းတဲ့အထိကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုထည့်နေတုန်းကျွန်တော့်အခန်းထဲမှာ Netflix တစ်ယောက်တည်းကြည့်နေသလိုပဲ။
ငါလိမ်နေတယ်လို့ထင်လား ကောင်းပြီ, ဟာသသင်အပေါ်ပါပဲ
ယောက်ျားတွေ၊ ငါကမင်းရဲ့တခြားသူတွေလိုပဲ။ ဒါကြောင့်နည်းပညာမှကြွလာသောအခါငါ clueless မိပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးတိုက်ခန်းသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုယူဆောင်လာခဲ့သည် ငါးနာရီ router တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် (ကျွန်ုပ်သည် Ethernet ကြိုးကိုမှားယွင်းသောထွက်ပေါက်ထဲတွင်ထည့်သည်) ။ ဒါဟာ Walmart ကနေစျေးအသက်သာဆုံးနဲ့လွယ်ကူစွာ set-up option ကိုဖော်ပြခဲ့သည်ဖို့မ (အငြင်းပွားကြဘူး, ငါ့ mom, တစ် ဦး စမတ်စျေးဝယ်ဖြစ်ငါ့ကိုသင်ပေး) ။
လွန်ခဲ့သော ၂ လကကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းကကျွန်ုပ်၏ Mac ပေါ်ရှိ control-f command ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကြည့်ရသည်မှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ Mac သုံးစွဲသူတိုင်းသည်သင်၏အမှန်တကယ် မှလွဲ၍ (အကယ်၍ သင်ဤလှည့်ကွက်အကြောင်းမသိလျှင်) ရပါတယ် ) ။ နောက်ထပ်သေးငယ်သည့်အသေးစိတ်အချက်တစ်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသည်သူ၏ဘ ၀ တွင် Mac အသုံးပြုသူ (ဘယ်လောက်)
ခင်ဗျားတို့အားလုံးဟာဒီသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ကိုယူဆောင်လာတာကိုမသိဘူး။ ငါ့မာနသည်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီး၊ ငါသည်ဤ SHIT ကိုယ်ပိုင်ထင်တယ်။
ငါပုံမှန်လူသား - ငါဆိုလိုတယ်သမျှ ... ငါ
ကွန်ပြူတာသိပ္ပံပညာကိုအဓိကထားနားထောင်တဲ့လူတွေကြားမှာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့သူရဲဘောကြောင်တဲ့၊ အထီး၊ ဝက်ခြံနဲ့လူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက Legend of Legends ကိုနာရီပေါင်းများစွာကစားနေတဲ့ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်မှာထိုင်ခုံမှာကပ်လျှက်ထိုင်နေသည်။ အမျိုးသမီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အပြန်အလှန်သူတို့ရဲ့မိခင်နှင့်အတူစာသားစကားပြောဆိုမှုဖြစ်ခြင်း။
သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ ဦး ခေါင်း၌တစ်စုံတစ် ဦး ၏ရပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်ကိုကပ်ရန် OK ကိုမဆိုလိုပါ။ လူတို့တွင်အမှန်တကယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ (ကျွန်ုပ်သိသည်မှာအရူးလော) နှင့်အခြားအရာများမှာအခြားသူများမဟုတ်ပါကထင်ရသည့်တိုင်၎င်းတို့အသည်းအသန်ဖြစ်နေသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည်ဂရိအသိုင်းအဝိုင်း၏တက်ကြွသောအသင်း ၀ င်တစ် ဦး ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည် Sperry ကို ၀ တ်ဆင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်ကိုကျော်ဖြတ်ပါ။ ) ငါအားကစားရုံသို့အမြဲတမ်းသွားသည် (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်…။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Chipotle အပေါ်စွဲလမ်းနေခြင်းမရှိပါက) ငါကကဖေးမှာအလုပ်လုပ်တယ် (ပြောရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေး - မိန်းကလေးအချိုးက) ယူနန်ပြည်နယ် ) ။
T.Spoons Iowa City သင်္ဘောသားများကိုကြွေးကြော်ပါ။
ဒါကောလိပ်ကလူတွေပါ အကယ်၍ comp-sci ဗိုလ်မှူးသည်ဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုကစားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်း (ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များရှိသည်) ကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါက၎င်းအား၎င်းတို့အား ပိုမို၍ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်သင်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်သင့်သည်။ ဤသူများသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများကိုပြုလုပ်သူများ၊ သင်၏တန်ဖိုးကြီးလှသောတွစ်တာနှင့် Instagram ကို ၂၄/၇ တွင်ဆက်နေရန်သေချာစေပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်ရှေ့တန်းဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ သူတို့ကဖြစ်နိုင် 10 နှစ်အတွင်းသင်၏သူဌေးဖြစ်လိမ့်မယ်။
သင်ယူခြင်းသည်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (သတိပေးချက် - ပျင်းစရာကောင်းသည့်အပိုင်း)
Pre-med ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်နှလုံးအစားထိုးကုသမှုကိုမပြုလုပ်နိူင်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်သန်းပေါင်းများစွာသောလူများအတွက်အကောင့်အချက်အလက်များကိုစုစည်းရန် back-end databases များကိုကုဒ်မချနိုင်ပါ။
သို့သော်လည်းငါသည်ငါ၏အမှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ငါသာ sophomore, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌မိုင်ရှေ့ဆက်နေသောငါကဲ့သို့ comp-sci ဗိုလ်ကြီးကဲ့သို့တူညီသောအသက်အရွယ်ရှိနေစဉ်, ငါမှာဖြစ်လိုသောအမှတ်ရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုမိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် Google သို့မဟုတ် Apple လိုကုမ္ပဏီမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ရတာဟာတကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့အချိန်နဲ့အားစိုက်ထုတ်ရတယ်။
ငါ့ရဲ့ back-up အစီအစဉ်ကငါ့ရဲ့မိဘတွေကို Chipotle ကိုနေ့တိုင်း ၀ ယ်နိုင်ဖို့ငွေအလုံအလောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းခြစ်မိနေတုန်းပဲ။ အစိုင်အခဲငါသိ၏။
Chipotle သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ Chipotle ကဘဝပဲ
ရဲ့ရိုးသားပါစေ ... ငါတို့ရှိသမျှသည်မလိုလားပါပဲ
သငျသညျလိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုမပြောပါနှင့်။ သင်လုပ်သမျှအားလုံးသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုမပြောပါနှင့်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်မှာတကယ်ကိုစိတ်ရှုပ်နေတယ်လို့အခုငါပြောနိုင်တာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းနည်း quirks တစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်မှတ်တယျ! လူတွေကိုလာပါ၊ တခါတလေနည်းနည်း kooky ဖြစ်တာကောင်းတယ်။